Chiitiko chevanhu Vakaremara | Karman Healthcare.com
The Ability Expo inoratidza zviitiko zvakawanda zvakasiyana zvinobva pamitambo inochinja kusvika kuzvinhu zvekudzidzisa. Ivo zvakare vanosanganisira emahara mashopu ayo anogona kukupa iwe yakazara ruzivo nezve hurema. Dzimwe dzehurukuro dzemusangano dzinosanganisira matipi emafashoni, kufambidzana dhizaini yekumba, kugadzirira kwechimbichimbi kune vanhu vane kuremara, nezvimwe zvakawanda! Kuti uwane runyoro rwakakwana uye ruzivo rwakadzama pane yega yega, unogona kudzvanya pano. Vanyori vachapindawo pachiitiko ichi voita kusaina mabhuku nemifananidzo. Neraki chiitiko ichi hachina kubhadharwa uye zvese zvaunofanirwa kuita kuzadza fomu kuti vakwanise kuteedzera vanhu vari kuenda uye iwe unokodzera kuenda mahara. Iyo yekubatanidza kune pre = kunyoresa isu kuzove pano. Usakanganwa kutarisa kana ichiwanikwa munzvimbo yako usati watanga kunyoresa kunze kwekunge iwe uchida kufamba chinhambwe chakanaka cheanogona expo.
Kuenda kuchiitiko chakadai seichi kekutanga uchiri wiricheya mushandisi achange achishamisa nekuti iwe uchawana ruzivo uye kudzidza zvinhu zvakawanda zvawaisaziva kunyange kumbovapo. Semuenzaniso, kana iwe wanga usingazive mabhiza anogona zvinopa kurapwa kwekurapa kupfuura iwe kwauchazokwanisa kuziva zvese zviripo kuziva kana iwe uchienda kumusangano iwoyo kwavanokudzidzisa nekukuratidza kuti bhiza rinogona sei kukubatsira iwe.
Ndiwo zvakare mukana wakanaka wekusangana itsva vanhu vane zvido zvakafanana nezvako. Zvakare, kana iwe uchifarira zvemitambo kupfuura iwe zvaunowana kukwikwidza neizvi vanhu vatsva uye ita shamwari. Pakazara zvakakosha kuenda nekuda kwezvose zvakanaka uye zvinenge zvisina zvakaipa.
Tora shamwari dzako kana mhuri iri zvakare vanoshandisa wiricheya kana vamwe vasina kururama vanoshandisa wiricheya asi une kuremara. Tora mbatya dzakanaka kuti uzviwanire zvirinani. Ipfungwa zvakare yakanaka kutora notepad kana chimwe chinhu kwaunogona kutora zvimwe zvinyorwa nekuti unonyatso kudzidza zvakawanda itsva zvinhu. Imwe pfungwa huru ndeyekuti kana ivo vachikubvumidza iwe kutora vhidhiyo wozotora mavhidhiyo ezveratidziro dzavanoita pamusangano wega wega kana dumba. Rangarira kubvunza kutanga usati wapinda mudambudziko uye unogona kudzingwa.
Kana iwe uri muchengeti zvinokurudzirwa kuenda zvakare nekuda kwemasangano ese eruzivo nematumba avanazvo. Muchengeti anogona kubatsirika nekuenda munzira dzakasiyana siyana kusanganisira ruzivo rweyakanaka tekinoroji yazvino yevanhu vakaremara. Ivo zvakare kuratidzira kurovedza muviri zvishandiso izvo kune vakawanda vanhu vakaremara zvakanyanya zvakakosha saka vachengeti vanofanirwa kuenda pachiitiko ichi uye kutora akawanda manotsi. pano Vhidhiyo yazvino LA vhezheni yechiitiko. Izvi batanidzo chinongedzo kune vlog yakatorwa nemumwe munhu pavakaenda uye vanoratidzira matumba akasiyana.